तपाईको आज बैशाख २६ गते सोमबारको राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकालाई मिल्नेछ विशेष लाभ ! « Sansar News
तपाईको आज बैशाख २६ गते सोमबारको राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकालाई मिल्नेछ विशेष लाभ !
२६ बैशाख २०७९, सोमबार ०७:११
स्रोत–साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। मध्याह्नदेखि भने सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। वादविवादले सुनिश्चित काम समेत अन्योलपूर्ण बन्न सक्छ।
चुनौती पन्छाउँदै काम बनाउन सकिनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भने मिहिनेतले जिम्मेवारी पनि दिलाउनेछ। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मध्याह्नपछि विवादास्पद जिम्मेवारीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आफ्नैले काममा अवरोध पुर्याउनेछन्। नयाँ काम थाल्न हतार नगर्नुहोला।
प्रयत्न गर्दा अवसर प्राप्त हुनेछ। तर आकस्मिक यात्राले नियमित काम रोकिन सक्छ। विवादास्पद अभिव्यक्तिले समस्या निम्त्याउने हुँदा समयमा होस पुर्याउनुहोला। परिस्थितिवश अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला। दिउँसोदेखि अस्वस्थताले कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। सानोतिनो समस्याले पनि अल्झाउन सक्छ। गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला।
वैधानिक प्रावधानले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पार्नेछ। अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। सुरुमा केही चुनौतीहरू देखिए पनि मध्याह्नपछि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ। खर्च लागे पनि स्रोतसाधन जुट्नाले मन उत्साहित हुनेछ।
मिहिनेत गर्दा लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विद्यामा वृत्ति, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरूलाई उछिन्दै अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ। मध्याह्नपछि भने खर्च बढ्नाले समस्या पर्न सक्छ। काम बिग्रनाले प्रतीक्षित नतिजा उत्साहप्रद नहुन सक्छ। हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ।
२०७९ वैशाख २६ गते, सोमवार, (९ मे २०२२)
आज बैशाख २५ गते आइतबार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !